Iyo nyowani vhezheni yePacketFence 9 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yePacketFence 9 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo
PacketFence inetiweki yekuwana yekugadzirisa mhinduro (NAC) uye network iyo inotsigirwa uye inozivikanwa. PacketFence inopa runyorwa runoshamisa rwe network dhizaini manejimendi uye maficha. PacketFence inogona kushandiswa kunyatso chengetedza ese ari maviri madiki network uye akakura kwazvo heterogeneous network.
PacketFence inotsigira kupihwa kwepakati pevashandisi kuwana kune network kuburikidza newaya uye waya isina waya iine kugona kuitiswa kuburikidza newebhu webhusaiti (nhapwa portal).
Se inotsigira kusangana nevekunze vashandisi dhatabhesi kuburikidza neLDAP uye Active Directory. Izvo zvinokwanisika kuvhara zvisingadiwe zvishandiso (semuenzaniso, kurambidzwa kwekubatanidza nharembozha kana nzvimbo dzekuwana), tarisa traffic kune mavhairasi, uone kupindira (kusangana neSnort), kuongorora kumisikidza uye software yemakomputa pane network.
Midhiya inowanikwa yekubatanidza nemidziyo kubva kune vakakurumbira vagadziri vakaita seCisco, Nortel, Juniper, Hewlett-Packard, 3Com, D-Link, Intel, naDell.
Tinogona kuratidza izvozvo nePacketFence isu tinopihwa kugona kuongorora zvishandiso zvakabatana mune network Uye simba gara kugara kwako mairi yatinogona kudzikamisa yako nguva pane network, huwandu hwebhendi rekushandisa, shandisa Firewall marongero.
Tinogona zvakare kushandisa mumiririri, gonesa kutevedza kutarisa, masisitimu uye mamwe magumo akabatana netiweki yako. PacketFence inogona kuve nechokwadi chekuti vamiririri (kana vatengi) vanoiswa panguva yekunyoresa uyezve kune yega yega kubatana.
Iyo software inosunungurwa pasi peGPL v2 rezinesi.
1 Chii chitsva muPacketFence 9?
2 Nzira yekuwana sei PacketFence 9?
Chii chitsva muPacketFence 9?
Nekuburitswa kweiyi nyowani vhezheni yePacketFence 9 Kugadziriswazve kwehutongi webhu interface inooneka, izvo izvo zvino zvakavakirwa paVue.js uye Bootstrap 4.
Zvakare ivo vanogadzira vakawedzera kutanga rutsigiro rweNgatinyorwe chitupa manejimendi yeRADIUS uye zvakare nhapwa nzvimbo, rutsigiro rweCisco ASA VPN network uye Fortnet VPN Management.
Inogona kuwanikwa mune nyowani interface module nyowani yekutsigira Aruba Instant Access uye PICOS switch. Wakawedzera rutsigiro rweAerohive yekuwana mapoinzi ne switch switch. YeDell switch, rutsigiro rwakawedzerwa kuVoIP uye kuwedzerwa kweFortinet FortiSwitch COA uye 802.1X.
Sarudzo yekudzima basa rinobvumidza sisitimu kujoina Windows Active Directory domain uye kuremadza kweDNS kutsvaga kwakawedzerwawo mukugadziriswa kweMariaDB.
Pakati pekuvandudzwa kunopihwa mukuburitswa kutsva uku, inguva yenguva kana uchibvumidza mushandisi wewebhu muUbiquity UniFi yekuwana nzvimbo yekudzora yekushandisa.
Iyo yekumisikidza marongero eApache mafirita akagadziriswa pamwe nekumisikidza kusarudzika zvakare kwakarongedzerwa conf / stats.conf.
Inotaridza zvakare kuvandudza manejimendi kweRADIUS hunhu kuti ubvise ruzivo rwako. Iyo VoIP yekumisikidza paramende mune iyo node_cleanup basa kupfuudza VoIP zvishandiso.
Sefa nyowani yeDHCP yakaitwa, iyo inobvumidza iwe kumisikidza kudzoka kweanopokana hunhu mune OFFER uye ACK mameseji.
Wakawedzera kugona kugonesa DHCP uye DNS masevhisi chete pane mamwe maratidziro enetiweki.
Uyewo kuiswa kwezvakawanda zvinyorwa zvekutendeseka kunoratidzwa, kusanganisira Facebook neGoogle. Uye otomatiki kukiya, kana zvichidikanwa, zvisingadiwe zvishandiso senge iPads, PlayStation Sony, xbox, pakati pemamwe maturusi.
Network michina rutsigiro (wired kana waya) senge 3Com, Aerohive, Allied Telesis, Aruba, BelAir / Ericsson, Brocade, Cisco, Dell / Force10, Enterasys, ExtremeNetworks, Extricom, Fortinet / Meru Networks, Hewlett-Packard / H3C, Huawei, Intel, Juniper Networks / Trapeze, LG-Ericsson US, Meraki, Mojo Networks, Motorola, Netgear, Nortel / Avaya, Ruckus, Xirrus uye nezvimwe.
Nzira yekuwana sei PacketFence 9?
Iko kunyorera kunotipa isu vaviri vanoisa ekusiyana kwakasiyana kweLinux, imwe iri mumadhodhi fomati iyo inogona kutorwa pasi kubva Iyi link uye imwe mu rpm mune iyi link.
Kune mamwe ese ekugovera isu tinokwanisa kushandisa kodhi kodhi uye kuumbiridza kunyorera
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yePacketFence 9 inosvika uye idzi ndidzo nhau dzayo
Mozilla inosvitsa marogo matsva eFirefox uye zvigadzirwa
Huawei inodaidza vanogadzira kuti vauye nemaapplication avo kuchitoro chavo cheAppGallery